Raila Odinga oo ugu baaqay madaxweyne Kenyatta inuu la tashado madax cadaalada dalka – Radio Damal
Raila Odinga oo ugu baaqay madaxweyne Kenyatta inuu la tashado madax cadaalada dalka
madaxa xisbiga ODM Raila Odinga ayaa madaxweynaha dalka uhuru Kenyatta ugu baaqay inuu wadahadal dheer la sameeyo madax cadaalada dalka David Maraga ka hor inta uusan qaadanin Go’aanka uu kukala diraayo aqalka baarlamaanka.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ayuu Mr. Odinga ku sheegay in arrintan ay kamid tahay arrimaha u bahan in loo qaado afti dadweyne si go’aan looga gaaro.
waxaa uu caraka ku dhuftay in loo baahanyahay in marka hore lagaaro is afgarad arrinta ku saabsan.
sidoo kale Raila ayaa ka codsaday madaxweyne Kenyatta in sida ugu macquulsan uu tashi la sameeyo Mr maraga inta aan la gaarin go’aanka lagu kala diraayo aqalka baarlamaanka.
Ra’isulwasaarihii hore ee dalka ayaa tilmaamay in soo jedinta madaxa cadaalada ay dadka iyo dalkaba galisay xaalad dastuuri ah iyo mid siyaasadeed oo u baahan in si taxadar leh looga tashado ka hor inta aan talaabo la qaadin.
Dhawaan ayay aheyd markii uu madaxada cadaalada dalka David Maraga uu u doo jeediyay madaxweyne kenyatta inuu kala diro aqalka baarlamaanka madaama ay ku guul dareysteen inay meel mariyaan sharicga jinsiyada ee laba melood meel.
Dhanka kale laba muwaadin ayaa maxkamada sare ee dalka horgeeyay dacwad ay kaga soo horjeedaan soo jeedinta Mr maraga iyagoona ku tilmaamay mid aan laga fiirsanin.